Waxaa aad muhiim u ah dadka isticmaala qaar ka mid ah in la isticmaalo qoraalka iyo subtitles si loo hubiyo in video ah in la daawaday aan la fahamsan yahay oo keliya, laakiin waxaa sidoo kale ku riyaaqay habka ugu fiican. Si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan ee suuragalka ah ayaa la helay arrintan la xiriira Media Windows ka Player sidoo kale waxa uu ka shaqeynayaan ah gundhig loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo natiijada in ay yihiin gobolka of farshaxanka iyo sidoo kale ugu fiican marka ay waa u imanayaa inuu ku daray faylasha .srt kordhin dibadda ciyaaryahanka. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan hababka la xiriira iyo siyaabo arrintan la xiriira.
Qaybta 1aad: Sida loo shid / off subtitles ah
Qeybta 2: Sida loo dar subtitles in Windows Media Player
Qeybta 3: Show qoraalka ama subtitles in hage rasmi ah Windows Media Player
Qeybta 4: Windows Media Player ma noqon doonaa subtitles ??
Habka la xiriira ma aha oo kaliya si sahlan oo fudud, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo shaqo sameeyey wax waqti ah gudahood oo dhan. Waa sabab la mid ah in habka ah in la soo sharaxay halkan ma aha oo kaliya fudud oo toos ah, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo natiijada ugu fiican ee gudaha wakhtiga ay suurto gal ugu yaraan. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in tallaabooyinka ay halkan ku soo bandhigay la raacay si isku mid ah iyo user waa in aan marnaba gudub kasta oo iyaga ka mid ah in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican la gaadhay hab ugu fiican.
Waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in user waa in ay sidoo kale isku dayaan in habkan guud ahaan qalabka kala duwan si loo hubiyo in natiijooyinku ay waafaqsan yihiin shuruudaha user iyo sida ugu fiican ee suurtagal ah la gaaray arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in user waa in u isticmaali hab la mid ah si loo hubiyo in subtitles waxaa lagu demiyo iyo sidoo kale labada hab isku mid yihiin ayna u oggolaadaan in user in ay raacaan isla Jidka arrintan la xiriira si loo hubiyo in wixii kaloo uu leeyahay lagu samayn. Ka dib waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo ay tahay in la hubiyo in user marnaba dhaco dhibaato marka ay timaado jeestay subtitles on ama iska sameeyo. Qaybta dambe ee tutorial inay hubiyaan in user helo macluumaad ku saabsan ku daray subtitles in ay videos sidoo kale in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican ayaa lagu helay in arrintan la xiriira iyo sidoo kale ka dhigi doonaa.
1. user waa in ay hubiyaan in aragtida maktabadda of Media Windows ka Player la furay si ay u bilowdo hawsha sameeyo:
2.In strep labaad user waa in la hubiyo in dulqabo la jiiday ugu sareysa iyo iyada oo xaq ah guji menu laga muujiyey iyadoo ka halkaas oo doorasho la doonayo la doorto sida kaaga muuqata sawirka hoose sameeyo:
3.Using jidka isku mid ah iyo habka user waa in la hubiyo in subtitles waxaa lagu demiyo sidoo sameeyo iyo tan ayaa sidoo kale soo gebogebeeyay habka buuxda iyo waxa loo arki karaa in geeddi-socodka ma aha mid fudud oo kaliya, laakiin sidoo kale waa mid aad u fudud in la raaco iyo iyada oo tutorial xataa xirfad laawe ah samayn kartaa tallaabooyinka fudayd iyo qanacsanaanta,
Geedi socodka la xiriira mar kale waa mid aad u fudud oo si sahlan tahay in la raaco iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa inay hubiyaan in tallaabooyinka lagu xusay hage hoose la raacay iyo jidka ku soo dhacdo habka asalka ah aan shaqayn ayaa sidoo kale intaa ku daray si loo hubiyo in hab oo dhan waa la muujiyaa, oo aan arin kasta oo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in inta badan dadka isticmaala farsamada casriga ah ayaa sidoo kale ka warqabin habka ah in la soo bandhigi ad sidaas daraaddeed waa boon ah ee dhammaan dadka isticmaala ee doonaya in ay ku darto subtitles in ay video in la ciyaaray daaqadaha media player.
1. user u baahan yahay si loo hubiyo in URL http://www.free-codecs.com/htm2php.php?f=directvobsub_download waxaa soo booqday si ay u hubiyaan in Sub Direct Vob la soo bixi oo ku rakiban. Waa in la karti mar dajinta la dhamaystiro,
2.Now user baahida fudud si loo hubiyo in faylka Cinwaan iyo faylka video asalka haayo folder isku magac la mid ah. Magaca faylka Cinwaan waa in la joojiyo oo la kordhiyo .srt:
3.Once video la ciyaaray ay sabab u tahay rakibo oo uu soo dhigay subtitles ee la soo bandhigi doonaa filin ama video ah in la ciyaaray ay dureereyso dhexdeeda. Haddii weli user helo arrimaha iyo dhibaa file waa in loo baxshay sida ayaa waxaa lagu muujinayaa shaashadda hoose. Arrinta haddii wajahay arrintan la xiriira la xalin doono iyo tan ayaa sidoo kale soo gebogebeeyay nidaamka.
In kastoo jidkii kor ku xusan ee muujinaya qoraalka ama subtitles sidoo kale waa rasmi ah oo la fulin karo iyada oo aan wax arrintan oo dhibaato user weli hubin karaa in hagaha rasmi ah oo uu soo yaalaa URL http://windows.microsoft.com/ en-na / daaqadaha / show-qoraalka-subtitles-warbaahinta-ciyaaryahan # 1TC = daaqadaha-7 waa browsed iyo wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in nidaamka la xidhiidha in lagu Xusi khusaysaa daaqadaha 7 kastaba ha ahaatee kaliya habka sidoo kale lagu saleyn karaa Vista daaqadaha iyo daaqadaha 8 qoraalkii oo dhan waxaa ka mid ahaa oo sabab la mid ah tan rasmi ah hage ka ​​dhigi kartaa sidoo kale waa in loo tixgeliyo mid ka mid boosaska badan si loo hubiyo in ugu fiican ayaa loo bixiyo arrintan la xiriira oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
"Waxaan subtitles demiyo in WMP on win7 iyo waxaan xaq u riixi oo la doortay 'dami subtitles' laakiinse iyagu ma ay noqon doonaan. Waxaan u isku dayay in VLC oo shaqeeyay ganaax aan u waayay. Cid og sababta ay tani u dhacdo?"
Wixii user arrinta sakhiray mid noqoto adag oo sabab la mid ah waxaa sidoo kale mararka qaarkood aad u niyad-jab aad u hesho subtitles marka aan loo baahnayn oo dhan. Si loo hubiyo in arrinta la xalin soo socda waa xalka in lagu dabaqi karo si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Waxaa jira ogeysiin ah gudahood bar hawsha la xiriira ee subtitles of video ah. Waa in la xaq u riixi si ay u naafada ah lagu xaliyo arrinta
User waa in la hubiyo in subtitles aan la hardcoded sameeyo. Waa la arki karaa by furitaanka file DVD oo uu soo guuriyeen arrintan la xiriira ka. Waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in filimka keli ah oo aan wax file Cinwaan aan la soo ciyaaray sameeyo iyo haddii arrinku sidan yahay markaas subtitles waxaa hardcoded oo aan la karin la saaro oo dhan.
> Resource > WMP > 4 Talooyin ku saabsan subtitles in Windows Media Player